Ụbọchị Ụmụ Nwaanyị n'ụwa niile abụrụla ihe tọrọ atọ ọtụtụ narị afọ gara aga, site n'ọnọdụ ọgbakọ mbụ ya na afọ otu puku, narị iteghete na iri na otu nke imirikiti ndị mmadụ karịrị otu nde n'ọnụ ọgụgụ na mba Austria, Denmark, Germany na Switzerland sonyere n'ime ya.
N'ụbọchị taa, Ụbọchị Ụmụ Nwaanyị n'ụwa niile bụzi nke onye ọ bụla. Ọ bụghị nke obodo, òtù ma ọ bụ ọgbakọ nke onwe.
Isiokwu maka Ụbọchị Ụmụ Nwaanyị n'ụwa niile nke afọ puku abụọ na iri na iteghete: Ndaba maka Ezi Ọdịnihu
Ọdịnihu bụ ihe a na-elegara anya. Ya mere ka anyị mee ụwa ka ọ bụrụ ebe nwere ezi ndaba n'etiti nwoke na nwaanyị. Mmadụ ọ bụla nwere ọrụ ọ ga-arụ n'ime ka nkea pụta ihe - oge niile, n'ebe niile
Site na mgbasa ozi n'ime obodo were ruo mba ụwa niile, anyị na-abanye n'oge dị oké mkpa ebe ụwa niile na-echekwube ndaba. Anyị ahụla ọghọm dị na mmekpa ahụ ụmụ nwaanyị mere obi ji atọ anyị ụtọ n'uru anyị ga-erite site na ndaba a.
Ndaba a ga-ebute ụwa na-alụkọ ezi ọlụ. Ka anyị tinye aka rụpụta ndaba maka ezi ọdịnihu.
Ọrụ Afọ Niile na Mmekọrịta
Ndaba maka ezi ọdịnihu nke afọ puku abụọ na iri na iteghete bụ maka afọ a niile. Ọ bụghị nke ga-anyụ ọkụ ma ọ bụrụ na Ụbọchị Ụmụ Nwaanyị n'ụwa niile agafee.
Isiokwu a na-arụtụ aka ma na-egosi ezi mkpa ọ dị n'afọ niile, site na ndaba maka ezi ọdịnihu, na anyụkọọ maamịrị ọnụ, ọ gbaa ụfụfụ.
Tute Ndị Ọzọ
Ya mere k'anyị lee anya ụzọ anyị ga-eji mee ka ndaba maka ezi ọdịnihu rute onye ọ bụla aka. Mee Ụbọchị Ụmụ Nwaanyị n'ụwa niile ụbọchị gị, werekwa kpọrọ ihe ma mee ihe ga-eweta mgbanwe pụrụ iche nye ụmụ nwaanyị n'ebe niile.
Gbasaa Ozi site na Social Media
Dee ozi gị maka Ụbọchị Ụmụ Nwaanyị n'ụwa niile. Site na ya, kpọọ òkù ma setịpụ aka gị ka onye ọ bụla soro n'ụgbọ ahụ na-aga aga ugbua - ndaba maka ezi ọdịnihu.
Ugbua bụ Oge
Maka Ụbọchị Ụmụ Nwaanyị n'ụwa niile nke afọ puku abụọ na iri na iteghete, ugbua bụ oge iji gbasa ozi a. Kedụ ka ị ga-esi nwee ndaba maka ezi ọdịnihu.
Ekele Pụrụ Iche
Ekele dịrị gị dịka ị na-akwado Ụbọchị Ụmụ Nwaanyị n'ụwa niile nke afọ a site n'isiokwu ya bụ ndaba maka ezi ọdịnihu.